VACGF120006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်, လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း (၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူး) တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၁၂၀၀၀
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း (၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူး) တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၁၂၀၀၀
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACGF12000
VACGF12000 6-In-1 Automatic Bottle Filling Machine is the machine that attracts customers the most in 2019.
VACGF12000 machine is directly imported from America, Italy, Taiwan, and China. It is manufactured using the most advanced filling technology of the United States. This product is specifically relevant to the bottled water manufacturers of large scales.
VACGF 120006IN 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ စက်သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၀ယ်ယူသူတွေကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့စက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို အမေရိကန်၊ အီတလီ၊ ထိုင်ဝမ်နဲ့ တရုတ်တို့မှ တင်သွင်းပါတယ်။ ဒီစက်ကို US ရဲ့ အကောင်းဆုံး နည်းပညာသုံးပြီး ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီစက်က ရေသန့်ဘူးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အလွန် သင့်တော်ပါတယ်။
VACGF12000 model can be used to fill the purified water, mineral water, and alkaline water into the pet bottles.
With almost parts made of stainless steel, the machine has high corrosion resistance and can be safely used inawet environment.
Withavariety of technical improvement on filling, washing, and capping processes, the operation capacity can reach up to 1,200 500ml bottles per hour.
This VACGF120006in 1 filling line will help to bring you high economic efficiency and save labor cost of 12-15 operators/
VACGF 120006in 1 ကို ဘူးထဲသိ်ု့ ရေသန့်၊ သတ္တုဆားပါသောရေနဲ့ အယ်ကာလိုင်း ရေများဖြည့်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အစိတ်အပိုင်း အားလုံးလိုလိုက စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် အပျက်အစီးဒဏ်ခံနိုင်ပြီး စိုစွတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။
လောင်းဖြည့်ခြင်း၊ ဆေးကြောခြင်းနဲ့ အဖုံးတပ်ပေးခြင်း နည်းပညာတိုးတက်မှုတွေကြောင့် တစ်နာရီမှာ 50 ml ဘူးပေါင်း ၁၂၀၀ ထိ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
VACGF 12000 စက်က စီးပွါးးရေးအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပြီး အော်ပရေတာ ၁၂ ယောက်ကနေ ၁၅ ယောက်ထိ ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
Let’s learn about this VACGF12000 6-in-1 automatic bottle filling machine in this article.
VACGF 120006In 1 ဘူးများကို အော်တိုဖြည့်ပေးသောစက်အကြောင်းကို အောက်ကဆောင်းပါးတွင် လေ့လာကြရအောင်။
Viet An မှ ထုတ်တဲ့ VACGF 12000 ဘူးများကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်
VACGF12000 is developed by the leading engineers in the industry of water filling and dosing. The machine is sophisticatedly designed, ensuring both aesthetics and high production efficiency.
It í distributed and installed by Viet An domestically and internationally with incentive prices and long-term maintenance. Free shipping-installation
VACGF12000 စက်ကို ရေဖြည့်ခြင်းစက်ရုံတွေမှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေက တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကို အကျိုးသက်ရောက်ခြင်း
အတွက်ရော အမြင်လှဖို့ပါ စနစ်တကျ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။
ဒီစက်ကို Viet An ကုမ္ပဏီမှ ပြည်တွင်းပြည်ပမှာ မက်လောက်စရာကောင်းတဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းချပေးနေပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် တပ်ဆင်ခ အခမဲ့ပါ။
Viet An General Trading Joint Stock Company has been equitized since Aug/2020 We are the leading company in importing, distributing different types of automatic filling machines withawide range of capacity, including 2,000 - 2,400 500ml bottles/hour to 100-1,200 20L jars/hour.
Viet An ကုမ္ပဏီကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ ရှယ်ယာဝင်လာကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီဟာဆိုရင် တစ်နာရီမှာ 500 ml ဘူးပေါင်း ၂၀၀၀ မှ ၂၄၀၀ ၊ တစ်နာရီမှာ 20 L ဘူးပေါင်း ၁၀၀ မှ ၁၂၀၀ စသဖြင့် နှုန်းထားတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ စက်တွေကို တင်ပို့ ဖြန့်ဖြူးတဲ့ နေရာမှာ ဦးဆောင်နေပါတယ်။
Viet An is also the leading company in importing, distributing and installing the industrial filling lines, bottle and jar blowing machines, tube ice making machines.
ဒါ့အပြင် စက်ရုံသုံးလောင်းဖြည့်တဲ့ လိုင်းတွေ၊ ဘူးတွေပုလင်းတွေကို မှုတ်ပေးတဲ့ စက်တွေ၊ ရေခဲစက်တွေကို တင်ပို့ဖြန့်ဖြူးတပ်ဆင်ပေးတဲ့ နေရာမှာလည်း ဦးဆောင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။
We always focus on product quality, constantly improve and enhance service quality to bring customers the highest benefits. The results of those continuous efforts are the certificates and noble awards given by the state and positive feedback from the consumers.
ကျွန်တော်တို့က ၀ယ်ယူသူတွေ အကျိုးအမြတ်များစေဖို့ ပစ္စည်းရဲ့ အရည်အသွေးပေါ်မှာ အမြဲတမ်း အာရုံစိုက်ပြီး ၀န်ဆောင်မှု အရည်အချင်းကိုလည်း တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ အခုလို မလျှော့တဲ့ အားအင်ကြောင့် နိုင်ငံတော်က ပေးအပ်တဲ့ ဆုတံဆိပ်လက်မှတ်တွေနဲ့ ၀ယ်ယူသူတွေဆီက ကောင်းတဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Some cups that Viet An has won (Viet An မှ ရရှိခဲ့သော ဆုတံဆိပ်အချို့)
Outstanding features of VACGF12000 6-in-1 automatic bottle filling machine
VACGF 120006In 1 ဘူးတွေကို အော်တိုဖြည့်ပေးသောစက်ရဲ့ကောင်းသော လက္ခဏာရပ်များ
● Wash the bottles automatically and quickly with the capacity of 1,200 bottles/hour.
● ဘူးတွေကို တစ်နာရီလျှင် ၁၂၀၀ နှုန်းနဲ့ လျင်မြန်စွာအော်တို ဖြည့်ပေးပါတယ်။
● Fill purified water into the bottles quickly, properly with less material required and high capacity of 1,200 bottles/hour.
● ရေဘူးတွေထဲကို မြန်မြန်ဖြည့်ပေးတယ်။ ပစ္စည်းအများကြီးမလိုအပ်ဘူး။ တစ်နာရီမှာ ဘူးပေါင်း ၁၂၀၀ ကို ဖြည့်ပေးနိုင်တယ်။
● Cap the bottles quickly, evenly with the capacity of 1,200 caps/hour.
● ဘူးတွေကို တစ်နာရီမှာ ၁၂၀၀ နှုန်းနဲ့ အဖုံးဖုံးပေးပါတယ်။
● Load the caps automatically and quickly for the capping process
● အဖုံးတွေကို အော်တိုသယ်ယူပေးပြီး လျင်မြန်စွာ အဖုံးတပ်ပေးပါတယ်။
● Detect the anomaly quickly and exactly
● မူမမှန်မှုတွေကို လျင်လျင်မြန်မြန် တိတိကျကျ စစ်ဆေးပေးပါတယ်။
● Be equipped withabottle clamping set to apply for various types of bottles, including 350ml, 500ml, and 1,500ml
● 350ml, 500 ml, 1500 ml စတဲ့ ဘူးပေါင်းစုံအတွက် ရေဘူးညှပ်အစုံကို တပ်ဆင်ပါ။
● Generate automatic and quick manufacturing process with up to 1,200 products/hour
● တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၁၂၀၀ နှုန်းနဲ့ လျင်မြန်တဲ့ အော်တိုလုပ်ဆောင်ခြင်း လည်ပတ်ပါတယ်။
● Replace 10-15 operators, savingaremarkable amount of labor expenses.
● အော်ပရေတာ ၁၀ ယောက်ကနေ ၁၅ ယောက်အထိ ကုန်ကျစရိတ်ကို ချွေတာနိုင်ပါတယ်။
VACGF12000 6-in-1 automatic pet bottle filling machine -aperfect choice for every manufacturer
VACGF 120006in 1 ဘူးတွေကို လောင်းဖြည့်ပေးသောစက်-ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု
Currently, the demand for bottled water is significantly increasing due to population growth and economic development. Thus, it is necessary to expand production scale and increase productivity to meet market demand.
လူဦးရေ ထူထပ်လာခြင်းနဲ့ စီးပွါးရေး တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုတွေကြောင့် ရေဘူးတွေကို သုံးစွဲလာသူတွေ များပြားလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုစကေး တိုးချဲ့ဖို့နဲ့ ထုတ်လုပ်မှု မြင့်မားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
With the previous semi-automatic filling machines, businesses can only produce with low productivity while having to spendalot of labor costs. This results in high product cost and low competitiveness. In addition, food hygiene and safety can not be absolutely guaranteed.
အရင်က တစ်ဝက်အော်တိုစက်တွေကြောင့် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေက နည်းနည်းပဲ ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး အလုပ်သမား ကုန်ကျစရိတ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါက ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်များပြီး စီးပွါးရေး မချဲ့ထွင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် အစားအသောက် လုံခြုံစိတ်ချရမှုကိုလည်း အာမမခံပါဘူး။
So how can we minimize production costs and keep labor efficiency unchanged?
ဒါဆို ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပြီး အလုပ်သမားတွေရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကို မပြောင်းလဲအောင် ဘယ်လိုလုပ်လို့ ရနိုင်မလဲ။
This VACGF12000 6-In-1 Automatic Bottle Filling Machine will help to answer the above question.
ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေက VACGF120006in 1 ဘူးတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့််ပေးတဲ့ စက်မှာ ရှိပါတယ်
The machine is designed to operate constantly inalong period of time.,
It can replace 12-15 operators. Thus, you can savearemarkable labor cost accordingly. If calculating based on the current salary of an operator at7million dongs/month, you can save from 84 to 105 million dongs/month.
ဒီစက်ကို အချိန်အကြာကြီးအသုံးပြုနိုင်အောင် ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။
ဒီစက်က အော်ပရေတာ ၁၂-၁၅ ယောက်အစား အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် လစာအရ အော်ပရေတာ တစ်ယောက်ကို တစ်လမှာ ဗီယက်နမ်ငွေ ၇ သန်းပေးရတယ်ဆိုရင် တစ်လကို ဗီယက်နမ်ငွေ ၈၄ သန်းကနေ ၁၀၅ သန်းအထိ ချွေတာနိုင်ပါတယ်။
Automatic filling machine - ISO standard
အော်တို လောင်းဖြည့်ပေးသောစက်-ISO စံနှုန်း
For Viet An, we always pay special attention to the product quality. Therefore, all our products are genuine with the manufacturing and installation process meeting ISO 9001:2015 international standard.
Viet An ကုမ္ပဏီက ပစ္စည်းရဲ့ အရည်အသွေးကို အထူးအာရုံစိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ပစ္စည်းတွေက စစ်မှန်ပြီးတော့ ထုတ်လုပ်မှု တပ်ဆင်မှုတွေကလည်း ISO 9001:2015 နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
Certificate of VA brand - ISO 2015 standard
VA တံဆိပ် မူပိုင်ခွင့် လက်မှတ် -ISO 2015 စံနှုန်း
The machine is designed with stable performance, high durability with less maintenance required, The operation process does not generate much noise,
ဒီစက်ကို လုပ်ဆောင်မှုနှုန်းကောင်းပြီး ကြာရှည်ခံအောင် ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာလည်း မဆူညံပါဘူး။
6 automatic steps of VACGF12000 Automatic Bottle Filling Machine
VACGF 12000 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ အော်တိုအဆင့် ၆ ဆင့်
This step plays an important role in the entire filling process.
It is 5m long, 22cm wide and 1m high. The air conveyor is equipped withaclamping part to hold the bottles and an air blowing part to transfer the bottles.
With this air conveyor, the bottles will be quickly transferred through the process.
ဒီအဆင့်က လုပ်ဆောင်မှုအတွက် အရေးပါပါတယ်။
ဒီစက်က အလျား ၅ မီတာ၊ အနံ ၂၂ စင်တီနဲ့ အမြင့် ၁ မီတာရှိပါတယ်။ ဒီစက်မှာ ဘူးတွေကို ကိုင်ထားဖို့ ညှပ်နဲ့ ဘူးတွေကို ရွှေ့ဖို့ လေမှုတ်အပိုင်း စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
2+3+4 steps: 3-In-1 washing, filling, capping
၂+၃+၄ အဆင့်များ-3 in 1 ဆေးကြောခြင်း၊ လောင်းဖြည့်ခြင်း၊ အဖုံးတပ်ခြင်း
The washing part of VACGF12000 filling machine is improved to have 24 washing heads, bringing much higher productivity compared to other common washing machines.
ဘူးများကို အော်တို ဆေးကြောခြင်း
VACGF 12000 စက်မှာ ဆေးကြောပေးတဲ့ခေါင်း ၂၄ ခု ပါတာကြောင့် အခြားစက်တွေထက် ပိုပြီးဆေးကြောပေးနိုင်ပါတယ်။
The bottle holder, gears, and rotating shaft of the washing machine are all made of high quality stainless steel to help the machine operate stably, without rust and long shelf life.
ဒီစက်မှာပါတဲ့ ဘူးတွေထည့်တဲ့ဗန်း၊ ဂီယာတွေ၊ လှည့်ပေးတဲ့တိုင်တွေကို သံချေးမတက်ဘဲ ကြာရှည်အသုံးခံအောင် အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
Mold sets corresponding to bottle size can be easily changed.
The washing speed is high, The washing heads operate by air pressure to spray the water into the bottles and wash them thoroughly, bringing higher washing productivity.
ဘူးအရွယ်အတိုင်း ပုံစံခွက်ကို လွယ်ကူစွာ ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆေးကြောပေးတဲ့ နှုန်းက မြန်ပါတယ်။ ဆေးကြောပေးတဲ့ခေါင်းက လေဖိအားနဲ့ ဘူးထဲကို ရေတွေဖြန်းပေးပြီး ဆေးကြောပေးပါတယ်။ ဆေးကြောနှုန်း မြင့်မားပါတယ်။
To be compatible with the bottle washing unit, this filling unit is also designed with 24 filling heads.
The bottle clamps are also designed to be flexible, replaceable for fillingavariety of bottle sizes
With stainless steel material of the rotating shaft, bottle clamp, filling heads, safety and hygiene during the filling process is absolutely guaranteed.
The filling heads are all attached to the sensor to ensure that the bottles are properly filled withaprogrammed amount of water. The filling speed can be adjusted. The maximum filling capacity is 1,200 500ml bottles/hour.
ဘူးများကို အော်တို ဖြည့်ပေးခြင်း
ဘူးဆေးပေးတဲ့ ယူနစ်နဲ့ ကိုက်ညီအောင် လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ယူနစ်ကို ခေါင်း ၂၄ ခုနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
ညှပ်တွေကို ဘူးအမျိုးအစား မျိုးစုံအတွက် ဖြုတ်ရ တပ်ရလွယ်အောင် လုပ်ထားပါတယ်။
စတိန်းလက်စ်စတီးတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် လုံခြုံမှုကို အာမခံနိုင်ပါတယ်။
ပရိုဂရမ်ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ ပမာဏအတိုင်း ဘူးတွေထဲကို ဖြည့်ပေးတဲ့ မျက်လုံးဆင်ဆာ ပါရှိပါတယ်။ လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့အရှိန်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ အများဆုံး ဖြည့်နိုင်တဲ့နှုန်းကတော့ တစ်နာရီမှာ 500 ml ဘူးပေါင်း ၁၂၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။
The capping unit inside the VACGF12000 filling machine is equipped with 8 capping heads. The capping process is operated quickly, exactly, and automatically.
The clamping unit is also flexibly designed foraflexible manufacturing process. Various bottles of different volumes can be used
VACGF 12000 မှာ ပါဝင်တဲ့ အဖုံးတပ်တဲ့ ယူနစ်မှာ ခေါင်း ၈ ခု ပါဝင်ပါတယ်။ အဖုံးတပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို လျှင်မြန်တိကျစွာ အော်တိုလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ညှပ်တွေကို ဘူးအမျိုးအစား မျိုးစုံအတွက် ဖြုတ်ရ တပ်ရလွယ်အောင် လုပ်ထားပါတယ်။ ဘူးမျိုးစုံအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Sixth step: Bottle loading machine
To meetafilling capacity of 1200 bottles / hour, VACGF12000 filling machine is also designed withabottle cap loading machine. The machine helps to load the plastic caps to supply the capping unit automatically with high loading speed,
The cap loading machine is designed with sophisticated and smart design. With an automatic conveyor motor system, all the bottle caps are not reversed, ensuring 100% of the air blowing in the right direction.
An eye sensor is attached to ensure that the machine will automatically supply more caps or stop supplying depending on the quantity left in the cap duct.
အော်တို အဖုံးတွေကို သယ်ပေးသောစက်
တစ်နာရီမှာ ဘူးပေါင်း ၁၂၀၀ ကို ဖြည့်နိုင်ဖို့ VACGF12000 မှာ အဖုံးသယ်ပေးတဲ့စက် တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒီစက်က ပလပ်စတစ်အဖုံးတွေကို အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ ယူနစ်ဆီကို အရှိန်မြင့်မြင့်နဲ့ သယ်ယူပေးပါတယ်။ ဒီစက်ကို စမတ်ကျကျ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ ရွေ့လျားစက် မော်တာကြောင့် ဘူးအဖုံးတွေက ၁၀၀% မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း ရှိနေမှာ ဖြစ်တယ်။
is one of the6automatic steps to be integrated into Viet An’s VACGF12000 automatic bottle filling machine của Việt An.
The machine is used to detect the anomaly inside the bottles, ensuringaqualified manufacturing process.
မူမမှန်မှု စစ်ဆေးပေးတဲ့စက်က VACGF12000 စက်မှာ ပါဝင်တဲ့ အဆင့်တွေထဲက တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို ဘူးထဲမှာရှိတဲ့ မူမမှန်တဲ့ အရာဝတ္ထုကို စစ်ဆေးဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။
A conveyor system is integrated into the VACGF12000 machine to save time transferring the bottles through different processes and reduce operation space.
VACGF 12000 စက်မှာ ဘူးတွေကို တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာ ရွှေ့တဲ့အခါ အချိန်ကုန်သက်သာအောင် ရွေ့လျားစက်စနစ်တစ်ခု တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
Below are6must-have steps ofaVACGF2000 automatic filling machine However, these6steps are not enough foracomplete bottled water production process. Thus, if you want to replace all manpower with modern machinery, try below automatic machines.
အောက်မှာ VACGF 12000 မှာတပ်သင့်တဲ့ အဆင့် ၆ ဆင့် ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီအဆင့်တွေက ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုလုံးအတွက် ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အဆင့်အားလုံးမှာ လူသားလုပ်အားကို အစားထိုးချင်တယ်ဆိုရင် အောက်က အဆင့်တွေကို ၀ယ်ယူကြည့်ပါ။
Additional automatic machines that can be purchased separately (optional)
1. VALP10000 bottle loading and arranging machine:
၁။VALP10000 ဘူးတွေကို သယ်ပေးပြီး စီပေးသောစက်
Bottle loading and arranging machine
The machine enables loadingawide range of bottles with high capacity, ranging from 7,000 to 1,000 bottles/hour. The maximum capacity can reach 12,000 bottles/hour. It is specifically suitable for the manufacturing factories applying modern production processes.
It is perfectly compatible with different bottle types, including 350ml, 500ml, and 1,500ml bottles.
ဘူးတွေကို သယ်ပေးပြီး စီပေးသောစက်
ဒီစက်က တစ်နာရီမှာ ဘူး ၇၀၀၀ ကနေ ၁၀၀၀၀ အထိ သယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အမြင့်ဆုံးနှုန်းကတော့ တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၁၂၀၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်က ခေတ်မီလုပ်ငန်းစဉ်တွေ အသုံးချနေတဲ့ စက်ရုံတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။
350 ml, 500 ml, 1500 ml စသဖြင့် ဘူးမျိုးစုံအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
Capacity (BPH) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 7000-10000
Size (LxWxH) (mm) အရွယ်အစား 2200X2600X2500
Weight (Kg) အလေးချိန် 1800
2. VAD12000 Bottle Blowing Machine
၂။ VAD12000 ဘူးတွေကို လေမှုတ်ပေးသောစက်
Pet bottle blowing machine ဘူးတွေကို လေမှုတ်ပေးသောစက်
Weighing 190 kgs, the machine hasablowing capacity ranging from 4,000 to 12,000 bottles/hour. The machine helps to remove all water remaining inside the bottles for the packaging process.
၁၉၀ ကီလိုဂရမ် အလေးချိန်ရှိပြီး တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၄၀၀၀ ကနေ ၁၂၀၀၀ အထိ လေမှုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်က ထုတ်ပိုးဖို့အတွက် ဘူးထဲမှာရှိတဲ့ ရေအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
3. VAL15000 Labeling machine with2heads:
၃။ VAL15000 ခေါင်းနှစ်ခုပါသော လေဘယ်တပ်စက်
Labeling machine with2heads
Labeling capacity: 9,000 - 15,000 labels/hour The machine can label 30-250mm labels
It applies the most advanced labeling technology of the United States
With2labeling heads, this machine brings much higher labeling capacity compared to other 1 head labeling machines.
The manufacturers can improve the entire bottling process with this advanced machine. Automatic. Less manpower required Accuracy up to 99.9%
လေဘယ်တပ်ပေးနှုန်း-တစ်နာရီတွင် ၉၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀ ထိ လေဘယ်တပ်နိုင်။ ဒီစက်က ၃၀-၂၅၀ မီလီမီတာ လေဘယ်တွေကို တပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။US ရဲ့ အဆင့်အမြင့်ဆုံး နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
ခေါင်းနှစ်ခုပါတာကြောင့် တခြားစက်တွေထက် လုပ်ဆောင်မှု မြင့်ပါတယ်။
ထုတ်လုပ်သူတွေက ဒီစက်သုံးတာကြောင့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို တိုးတက်စေပါတယ်။ လူသားလုပ်အား အနည်းငယ်သာ လိုပါတယ်။ မှန်ကန်မှုက ၉၉% အထက်ရှိပါတယ်။
၄။စက်က ဘူးတွေကို ကော်ခြောက်နဲ့ ကပ်ပြီး လေဘယ်တပ်ရန် အော်တို လှည့်ပေးသည်---VAR15000
The machine rotates automatically to label the bottles with opp labels and melt glue
စက်က ဘူးတွေကို ကော်ခြောက်နဲ့ ကပ်ပြီး လေဘယ်တပ်ရန် အော်တို လှည့်ပေးသည်။
Technical specifications နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ
5. Steam Membrane Shrinking Machine VAS15000.
၅။ရေနွေးငွေ့ဖြင့် ပုလင်းအလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက် VAS 15000
VAS15000 Steam Membrane Shrinking Machine
Labeling capacity: 10000 - 15,000 labels/hour
Application: Use the heat of the steam to shrink the film onto the bottles
The machine consists ofaboiler,asteam duct andamembrane shrinking chamber. It is normally located behind the labeling machine and in front of the bottle blowing machine.
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း- တစ်နာရီတွင် လေဘယ် ၁၀၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀
အပလီကေးရှင်း-ဘူးပေါ်ကို အလွှာကို ရှုံ့ရန် ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အပူပေးသည်
ဒီစက်မှာ ရေနွေးအိုး၊အငွေ့ပြွန်နဲ့ အလွှာကို ရှုံ့ပေးတဲ့အကန့် ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီစက်က အများအားဖြင့် လေဘယ်တပ်ပေးတဲ့စက်ရဲ့ အနောက် မှုတ်ပေးတဲ့စက်ရဲ့ အရှေ့မှာ ရှိပါတယ်။
ရေနွေးငွေ့ဖြင့် ပုလင်းအလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက် VAS 15000 ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ
VA22000 မှင်စက်ကလေးများဖြင့် ပုံဖော်ပေးသော ပုံနှိပ်စက်
The machine use ink jet printing technology with the capacity of 22,000 bottles/hour
Up to3lines of text can be printed.
Dirty ink can be automatically washed at the nozzles. No clogging phenomenon
မှင်စက်ကလေးများဖြင့် ပုံဖော်ပေးသော ပုံနှိပ်စက်
ဒီစက်မှာ တစ်နာရီမှာ ဘူး ၂၂၀၀၀ ကို မင်ပရင့်ထုတ်နိုင်တဲ့ နည်းပညာသုံးထားပါတယ်။
အများဆုံး စာကြောင်း ၃ ကြောင်း ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
ညစ်ပတ်နေတဲ့ မင်တွေကို အော်တိုဆေးပေးပါတယ်။ မင်ပိတ်တာတွေ မဖြစ်ပါဘူး
လော့အလွှာကို အော်တို ရှုံ့ပေးသောစက်- VAGM 10000
Automatic log membrane shrinking machineAutomatic log membrane shrinking machineThe machine applies automatic membrane shrinking technology to replace manpowerIt includesamembrane shrinking chamber,aconveyor andaframeWith this membrane shrinking machine, it is easy to wrap the bottles into different packs of 6, 12, 24 bottles per pack.လော့အလွှာကို အော်တို ရှုံ့ပေးသောစက်- VAGM 10000လူသားလုပ်အားကို လျှော့ချရန် လော့အလွှာကို အော်တို ရှုံ့ပေးသော နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ အလွှာရှုံ့ပေးသော အကန့်၊ ရွေ့လျားစက်နဲ့ ဖရိန်တစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။၆၊၁၂၊၂၄ အစရှိသဖြင့် ပါကင်တွေမှာ လွယ်ကူစွာ ထုတ်ပိုးနိုင်ပါတယ်။
Technical specifications နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ
If you are interested in this machine, call us now for free consultant Hotline: 0949414141
တကယ်လို့ ဒီစက်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့ ၀၉-၄၉၄၁၄၁၄၁ ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Technical specifications of VACGF12000 automatic filling machine
VACGF 12000 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ
A. VACGF12000 FILLING MACHINE -6MUST -BUY ITEMS
VACGF 12000 လောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ ၀ယ်ကိုဝယ်ရမည့် အဆင့် ၆ ဆင့်
Washing head ဆေးကြောပေးသောခေါင်း 24
Filling head ဖြည့်ပေးသောခေါင်း 24
Capping head အဖုံးတပ်ပေးသောခေါင်း 8
Machine capacity (350ml bottles/h) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 10,000- 12,000
Machine capacity (500ml bottles/h) စက်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 10,000- 12,000
Machine capacity (1,500ml bottles/h) စက်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 3,500-4,000
Power ပါဝါ 4.5
3 in 1 Dimension(LxWxH) (mm)3in 1 အတိုင်းအတာ 2800*2200*2400
Weight အလေးချိန် 3500
Plastic conveyor (LxWxH) (mm) ပလပ်စတစ် ရွေ့လျားစက် 25000*160
B. AUTOMATIC STEPS (PURCHASE SEPARATELY) TO BE INTEGRATED INTO VACGF120006IN 1 FILLING MACHINE
VACGF120006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ သီးခြားဝယ်ယူနိုင်သော အဆင့်များ
1. VALP10000 bottle loading and arranging machine
VALP10000 ဘူးတွေကို သယ်ပေးပြီး စီပေးသောစက်
2. VAD12000 Blowing machine
Hỏi đáp & đánh giá VACGF120006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်